Fijirihana: tsy ny fanaovana zavatra tsara ihany fa ny fieritreretana tsara kokoa ny zavatra | Avy amin'ny Linux
Avy amin'ny lahatsoratray teo aloha mifandraika amin'ny lohahevitra «Mpijirika» antsoina hoe «Hetsika mifandraika: Raha mampiasa rindrambaiko maimaim-poana isika, hacker koa ve isika?»Izay hiresahantsika ny atao hoe Inona no hacker? ary nasehonay vetivety ny niandohan'ny hetsika ankehitriny, ny tanjony, ny maha-zava-dehibe azy ary ny fitoviana na ny fifandraisany amin'ilay Free Software Movement, Azontsika atao ny mamoaka mora foana ity hevitra afovoany manaraka ity: "Ny mpijirika dia manao zavatra tsara kokoa noho ny hafa toy ny fahaizany satria mihevitra zavatra tsara kokoa sy amin'ny fomba tena hafa izy".
Ireo mpijirika dia tsy vitan'ny hoe manao zavatra tsara kokoa na tsy mampino, izany hoe tsy vitan'ny famahana olana sy / na fananganana zavatra manavao na mahery vaika izay heverin'ny hafa ho sarotra na tsy azo atao, fa amin'ny fanaovana azy ireo dia mieritreritra tsy mitovy amin'ny antononyIzany hoe, mieritreritra izy ireo amin'ny resaka "fahalalahana, fahaleovan-tena, filaminana, tsiambaratelo, fiaraha-miasa, fampitomboana." Raha te ho mpijirika ianao dia tsy maintsy mitondra tena araka ny voalazan'ity filozofia fiainana ity, ento ao aminao io fihetsika io, ataovy izay ampahany manan-danja amin'ny fiainanao.
2.1 Hack ny saintsika
2.2 Fijirihana ny mekanisma sy ny vaovao laninay
Fa raha mieritreritra ny hamboly ny toe-tsain'ny "Hacker" indrindra ianao raha "Lover of Free Software" na ho Developer na UserToy ny fomba iray hahazoana fanekena eo amin'izao tontolo izao iasanao, dia manao hadisoana ianao.
Manao sy misaina toy ny hacker, lasa karazan'olona mino fa azo hatsaraina ny betsaka na ny zavatra rehetra ary azo hatsaraina, ary manao izay azony atao hanatanterahana ireo zavatra ireo ho tombontsoan'ny maro an'isa indrindra izy ireo, dia zavatra iray izay tokony hanompo antsika tamin'ny voalohany mba hianarana sy hitazomana antsika hanana antony, ary hahafahantsika manampy ny hafa.
Noho izany, ny fomba mahomby indrindra hahatongavana ho mpampianatra dia ny maka tahaka ny fisainan'ny mpampianatra, tsy amin'ny fahaizany fotsiny, fa amin'ny ara-pientanam-po koa. Ka ny saina malalaka amin'ny famakiana / fanoratana lohahevitra tsy manam-petra amin'ny fomba fijery samy hafa, amin'ny hevitra tsy mitovy na mifanohitra, amin'ny tolo-kevitra sy hevitra tsy azo atao na tsy mahazatra dia tena ilaina mba hananana toe-tsaina hacker.
Hack ny saintsika
Tokony hampitandrina anao momba zavatra iray aho. Manana fahazaran-dratsy aho ny mieritreritra fanontaniana alohan'ny hamaliana. David Perkins, profesora ambony amin'ny fanabeazam-pirenena ao Harvard ary manam-pahaizana amin'ny fianarana, ny fahatakarana ary ny famoronana.
Isan'andro dia mazàna manana eritreritra tsara maro ny olona ary maro ny zavatra tsy dia tsara loatra. Izany dia mamela antsika toerana malalaka amin'ny fiainana handeha amin'ny làlan-diso raha tsy mieritreritra tsara kokoa momba ny fampahalalana nohaninay momba ny faritra samihafa amin'ny fiainana: fanapahan-kevitra manokana, toerana politika, fifandraisan'olombelona, ​​fiheverana filozofika ary toerana ara-pivavahana.
Ny tena zava-misy dia izao tontolo izao dia toerana saro-pantarina izay matetika ny olona dia mieritreritra foto-kevitra samihafa, amin'ny fomba izay tsy mifanaraka amin'ny fomba namoronana, nampitana ary namolavola ny rantsantanantsika. Ny olona dia mirona mieritreritra ny mombamomba ireo lohahevitra laniana amin'ny fomba izay ahatongavan'izy ireo hatrany ary mirona mankany amin'ny fomba fijery efa voalamina mialoha amin'io fampahalalana io ihany, ka manamafy ny foto-kevitry ny "famitahana ny tena ho faly."
Izany no izy ny olona mirona faly amin'ny hevitra na lohahevitra manokana dia mirary mahazo na hahazo vaovao mora kokoa izay manamafy izany hevitra na lohahevitra izany, izay, raha sendra hevitra diso na lohahevitra namboarina, dia manamafy hatrany ny finoana diso azy eo afovoan'ny fahatsapana fahasambarana tsy misy.
Noho io fisehoan-javatra io, dingana tsara tokony hatao ny "Hack ny saintsika", amin'ny teny hafa dia tsy maintsy "mampiofana tena" isika hiatrehana ireo endrika samihafa amin'ny hevitra, lohahevitra na toe-javatra samihafa. Miezaha mametraka ny tenantsika amin'ny fomba fijerin'ny hafa na ny lafiny mifanohitra amin'ny hevitra, lohahevitra, toe-javatra na vondrona. Miezaha hampahafantatra ny tenantsika amin'ilay voadinika, tantarao an-tsehatra ireo traikefa na dia azo atao aza. Hanolotra soso-kevitra hananana fitsikerana bebe kokoa noho ny fironana ara-tsaina momba ireo zavatra manodidina antsika.
Eo anelanelan'ny safidy roa, safidio ny fahatelo. David Perkins
Mametraha fanontaniana amin'ny maha-azo itokiana ireo loharanom-pahalalana izay laninay, ampiasao matetika ny fisainana "Out of the box" (Out of the box), avelao ny hevitra tsy mihetsika, tsy mety diso ary mandrakizay, izay mazàna amin'ny karazana "Toekarena - Politika - Ara-pinoana", teknika ankoatry ny hafa izay manampy antsika hanokatra ny saintsika amin'ireo fahaiza-manao sy fotoana vaovao sy tsy voadinika.
Ny fianarana mieritreritra tsara kokoa dia manampy antsika hahita fahombiazana bebe kokoa amin'ny tanjontsika. Ny fikafika dia ny fahalalana ny fomba hanapahana hevitra tsara kokoa hoe aiza no hampiasaintsika bebe kokoa ny eritreritsika sy ny ezaka ataontsika, ho an'ny vahaolana sy tombontsoa iraisana izay ampidirina ao ny iray, fa tsy hoe aiza no iray na tena mpahazo tombony. Eo no tokony hananana fahendrena kokoa raha ny fisainana no resahina.
Fijirihana ny mekanisma sy ny vaovao laninay
Ao anatin'ny tontolo misy tahirin-kevitra marobe toy izany dia takatr'ireo orinasan-tserasera lehibe sy orinasan-teknolojia lehibe fa zavatra iray ihany no mendrika: ny saintsika. Tristan Harris, mpiasan'ny Google taloha.
Orinasa teknolojia (Internet, solosaina, fahitalavitra, finday, tambajotra sosialy ary fampahalalana / serasera) miorina amin'ny fahombiazana ara-toekaren'ireo maodelin'ny orinasany izy ireo amin'ny alàlan'ny fanodikodinana ny sain'ny mpampiasa azy sy ny famolavolana ny fitondran-tenany sy ny heviny. Tanjonao: tazomy ny olona raha mbola azo atao ny mampiasa sy mandany ny vokatrao, ny atiny ary ny fampahalalana anao. Fa maninona Vola sy fahefana.
Ny ifantohan'ny saintsika dia ny vavahady ho an'ny hafa (Orinasa teknolojia sy mpanao politika, ankoatry ny hafa) mankamin'ny tontolontsika anatiny, ao an-tsaintsika, fihetsem-po, fahatsapana ary koa ny fanapahan-kevitra raisintsika. Mifaninana avokoa mba hahazo vahana. Isaky ny misy fomba mahomby kokoa, mahatonga antsika ho andevozin'ny loharanom-baovao sy fahafaham-po avy hatrany, manasaraka antsika amin'ny olombelona hafa sy amin'ny tontolo voajanahary misy antsika.
Manjary tsy milefitra amin'ny fahasosorana, manjary mahatsiaro ho ekena sy ekena, izay mitarika antsika hanana eritreritra ratsy, mifototra amin'ny zava-misy hita eo amin'ny tontolo sosialy virtoaly.
Izany no mahatonga ny maha hacker midika hoe "misaina tsara kokoa." Ny fisainana tsara kokoa izay mitaky ny fisorohana ny fanodikodinam-bola, fandresen-dahatra ary / na ny fanetsehana amin'ny alàlan'ny fanondrotana ny sitrapontsika, amin'ny alàlan'ny fampidirana ao amintsika ireo fihetsika, fihetsem-po na valinteny tadiavin'ny hafa, raha tsy misy ny fandraisantsika anjara, ny fampiasana ny fitsarantsika mitsikera.
Ny fieritreretana tsara kokoa, ny fampivelarana ny fisaintsainanao manokana, dia matetika no fanoherana ny fanodinkodinana na famitahana tena. Ny fahatsiarovan-tena momba izay ampifantohantsika ny saintsika dia singa iray tena ilaina amin'ny fisainana hacker. Ny fifantohana dia vavahady mankamin'ny fizotry ny fandresen-dahatra raha ny fisainana kritika kosa dia fitaovana ahafahantsika manavaka ny vaovao azontsika amin'ny fomba rehetra. Ny fahafantarana ihany koa ireo fitongilanana momba ny kognita izay aharihary amintsika dia afaka mamela antsika handray fanapahan-kevitra tompon'andraikitra bebe kokoa.
Mety ho toa mahafinaritra be ny hoe mpijirika, manao zavatra ataon'ny mpijirika, misaina toy ny mpijirika, fa ny marina dia ny maha-olona, ​​manao sy mieritreritra toa ny hacker dia karazana fialamboly izay mitaky ezaka be sy antony manosika be. Ny mpijirika dia tsy maintsy mahatsapa na mahatsapa karazana fahafinaretana anaty, voajanahary ary voajanahary rehefa mamaha olana izy, manatsara ny fahaizany, mampihatra ny faharanitan-tsaina, manontany ny zava-misy ary tsy miombon-kevitra amin'ireo zava-dehibe amin'izao tontolo izao, ny rafitra, izay ho an'ny hafa mirona tsy hita maso na tsy ilaina, na ratsy kokoa, tsara mandrakizay, mety, na mahitsy ara-politika.
Zavatra maro hafa no mazàna mampiavaka ny toetra Hacker iray, toy ny fiaviany "Anti-System".Fa ny fikirizana sy ny fanoloran-tena amin'ny zavatra tian'izy ireo matetika dia mivadika ho karazana lalao mahery vaika fa tsy mahazatra azy ireo. Zava-dehibe io fihetsika io amin'ny lasa mpijirika.
Manantena izahay miaraka amin'ity famoahana ity "Mifohaza izay Hacker izay ananan'ny tsirairay ao anatiny" manantena ny hanao zavatra lehibe ho an'ny hafa amin'ny ankapobeny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Fijirihana: tsy ny fanaovana zavatra tsara ihany fa ny fisainana zavatra tsara kokoa
Manomboka herinandro Excelent. $ -> Faly_Hacking
Faly be aho fa tianao izany, ary misaotra anao noho ny hevitra tsara nataonao.